Biby sy natiora Basics
Inona no Nofinofy Dinosa Velona sy Virjiny Tany Virjiny?
Tanytrachelos, tantara an-tsokosoko Virijiny.
Mahagaga fa ho an'ny fanjakana iray izay manan-karena amin'ny sisan-karingarina hafa, dia tsy nisy dinosaure tena hita tany Virginie hatramin'izay - ireo dian-tongotra dinôzôra, izay farafaharatsiny dia manondro fa niaina tao amin'ny Old Dominion ireo reptile majestic. Mety tsy mety ho fampiononana izany, fa nandritra ny vanim-potoana Paleozoic, Mesozoic sy Cenozoic, Virginia dia trano fonenan'ny bibidia maro, avy amin'ny bibikely mialoha ny tantaran'ny tantaran'i Mammoths sy Mastodons, araka izay azonao jerena ato amin'ity sary mihetsika ity. (Jereo ny lisitr'ireo dinôzôra sy biby efa fantatry ny fanjakana amerikanina tsirairay .)
Ny Stone Stone Quarry, any Stevensburg, Virginie, dia trano fonenana an-jatony dinôzôra ara-bakitenin'ny datin'ny faran'ny Triassic , 200 tapitrisa taona lasa teo ho eo izay - ny sasany amin'izy ireo dia nandalo fitsaboana kely sy malefaka mitovy amin'ny Coelophysis atsimo-andrefana. Farafahakeliny karazana dinôzôra no namela ireo sarin-dian-tongotra ireo, anisan'izany ireo mpihinana hena, fa ireo prôtauropods tany aloha (ireo razambe faran'ny saoropôda goavam-be tamin'ny vanim-potoana taorian'i Jurassic) sy ny fiaramanidina, roa-legged ornithopods .
Tanytrachelos, tantara an-tsokosoko Virijiny. Karen Carr
Ny akaiky indrindra ny fanjakan'i Virginie dia efa nahazo ny fôsily dinôzôra tena izy, Tanytrachelos dia bitika sy lava lava be teo amin'ny tapany fahatelo , 225 tapitrisa taona lasa izay. Tahaka ny amphibiana, Tanytrachelos dia nahafinaritra ny nandeha nivezivezy tany anaty rano na tany an-tanety, ary azo inoana fa nitoetra tamin'ny bibikely sy ny zavamananaina an-dranomasina kely. Nahagaga fa zato monja Tanytrachelos no tafaverina avy tao amin'ny Solite Quarry any Virginie, ny sasany amin'izy ireo miaraka amin'ny voatabia voatahiry!
Chesapecten, oniversite tsy miankina Virginia. Wikimedia Commons
Ny fosilin'ny fanjakana ofisialin'i Virginie, Chesapecten dia (tsy mihomehy) ny sifodranon'ny Miocene teo aloha teo amin'ny vanim- potoan'ny Pleistocene tany am-piandohana (eo amin'ny 20 ka hatramin'ny roa tapitrisa taona lasa izay). Raha toa mahagaga ny anarana hoe Chesapecten, izany dia noho io fivalozana io dia manome voninahitra ny Chesapeake Bay, izay ahitana ireo karazana maro samihafa hita. Chesapecten ihany koa ny fôsily voalohany any Amerika avaratra izay horesahina sy aseho amin'ny boky, izay nosoratan'ny mpandinika Anglisy tamin'ny 1687.
Fitaovan'ny rano teo aloha avy ao amin'ny Solite Quarry any Virginie. VMNH Paleontology
Ny Solite Quarry, any amin'ny faritr'i Pittsylvania any Virginie, dia iray amin'ireo toerana vitsy manerana izao tontolo izao mba hitahiry porofo momba ny fiainan'ny bibikely hatramin'ny taonjato voalohany, 225 tapitrisa taona lasa izay. (Ny ankamaroan'ireo bug teo aloha dia mety nasongadina tao amin'ny sakafo sakafo an'ny Tanytrachelos, izay nofaritana tao amin'ny sary # 3.) Tsy ireo dragona goavam-be misy ilay karona-be mpanankarena oksizenina 100 tapitrisa taona talohan'io, ireo bibikely maotina izay mifanaraka akaiky amin'ny mpanaraka azy ankehitriny.
Cetotherium, trozona efa nisy teo aloha tany Virginie. Wikimedia Commons
Noho ny fisian'antsampeo sy ny sasantsasany tsy mitombina ity fanjakana ity, dia mety tsy ho gaga ianao raha hianatra fa misy trozona maromaro efa tranainy hita tany Virginie. Ireo gitara roa manan-danja indrindra dia Diorocetus sy Cetotherium (ara-bakiteny, "biby trondro"), ny farany dia tahaka ny trozona mainty matevina. Ny fanantenana ny taranany malaza, ny Cetotherium dia nanala ny plankton avy tao anaty rano niaraka tamin'ny takelaka voalobokazo voalohany, iray amin'ireo trozona voalohany natao tao anatin'ny vanim-potoana Oligocene (30 tapitrisa taona lasa izay).
Mammoths sy Mastodons
Tahaka ny firenena maro any Etazonia, i Pleistocene Virginia dia nivezivezy tamin'ny alàlan'ny nandrobana ny andian'ireo elefanta teo aloha , izay nijanona tao ambadiky ny nifiny nify, tusks ary taolana kely. Na ny Amerikanina Mastodon ( Mammut americanum ) sy ny Woolly Mammoth ( Mammuthus primigenius ) dia efa hita tao amin'io fanjakana io, izay nanalavitra lavitra ny toeram-ponenana kiriodra efa antitra (tamin'izany fotoana izany, mazava fa, ny faritra sasany any Virginie dia nahafinaritra kokoa ny toetrandro noho izy ireo ankehitriny ).
Tsy zavamananaina ara-teknolojia ara-teknolojia ny Stromatolites, fa ny fotony lehibe sy mavesatra ao amin'ny fototr'ireo fôsily dia namela ny alanin'ireo algôn taloha (zana-borona maromaro). Tamin'ny taona 2008, ireo mpikaroka avy any Roanoke, Virginia, dia nahita trotraolita roa tonta ary roa tonta izay mampiaraka hatrany amin'ny vanim-potoana faharoan'i Cambrian , tokony ho 500 tapitrisa taona lasa izay - fotoana izay nanombohan'ny fiainana teto an-tany ny fiovan'ny toetr'andro - voavolavola amin'ny sela misy sela.
Ireo karazana vovobony 31
Ahoana ny fomba handikana ny anarana Dinosaur
Tantara fohy momba ny fanjonoana Cod
Mianara momba ny vanim-potoana dinosaoro samihafa
Ny vanim-potoanan'ny Paleogene (65-23 tapitrisa eo ho eo)
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Michigan
Famaranana amin'ny fanovana
Ny antony 10 dia nipoaka ny biby
Ny Epicôeneo Epoch (5.3-2.6 tapitrisa taonina eo ho eo)
Ny Finches Charles Darwin
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Californie
Ahoana ny fampiasana ny matoanteny Verb 'Echar'
Inona no tokony hataonao rehefa mahatsiaro ho be loatra ianao any amin'ny oniversite?
Torohevitra enina mba hivarotana sy hampiroboroboana ny fitetezam-paritra
Mary Dyer, Quaker Maritiora any Colonial Massachusetts
Ny governemanta dia mandrindra fanafody fanafody
Mianara bebe kokoa amin'ny Prièreo: Torohevitra ho an'ny Fitiavana bebe kokoa amin'ny Hybrido
Mianara momba ireo mpitsikilo voalohany Amerikana, ny Ring of Culper
Review of Bridgestone Blizzak DM-V1
Chainsaw Shinesaw Issues
FITAHIANA FITIAVANA FITIAVANA
Ny anaran'ny anarana NEUMANN sy ny tantaram-pianakaviana
Angels: Anjely mitsangatsangana amin'i Maria Virjiny
Sarintanin'ny World Hotspots
Ireo dokambarotry ny mozika tsy maintsy mijery ny '90s
Ahoana ny fomba fiasa sosialy afaka miomana ho amin'ny sehatra ho an'ny daholobe
Manangana ny Bridge Brooklyn
Ny taonjato faha-ady: vanim-potoanan'ny taona 1940
Facts mikasika ny Shark Whale
Ilay Lehilahy Mamandrika no Mamaky Laza
Fotoana fisehoana hafa
Ahoana no fomba anaovana ny molekiolaka maimaim-poana?
Inona no ataon'i Etazonia amin'ny ady atao amin'ny fampihorohoroana?
Ny kabary amerikana amin'ny taonjato faha-20 dia toy ny soratra amin'ny literatiora
Manoratra momba ny karatra mena sy ny migratorialisma
Fanadihadiana momba ny Copyright ny Artist: azoko atao ve ny manao sary hosodoko?